Samsung Galaxy S4 Lockscreen ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Androidsis
မည်သည့် Android4terminal တွင်မဆို Samsung Galaxy S4.0 lock screen မည်သို့တင်ရမည်နည်း
ငါအရှိဆုံးကြိုက်နှစ်သက်အရာတစျခု အန်းဒရွိုက် operating system ကို, ၎င်း၏စတိုင်၏ applications များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရုံပြောင်းလဲပစ်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ် launchers သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံရန် applications များ သော့ဖွင့်စနစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal မှ။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယရွေးစရာကိုဂရုစိုက်တော့မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်သားပြင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ဖြစ်သည် သော့ခတ် / သော့ဖွင့် ဒါကြောင့်အပြည့်အဝအသွင်အပြင်ပေးရန် Samsung ရဲ့ Galaxy S4နှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရုံ အခမဲ့လျှောက်လွှာ y root user ဖြစ်ရန်မလိုပါ ဒီလိုမျိုး
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လျှောက်လွှာဟုခေါ်သည် Galaxy S4 လော့ခ်မျက်နှာပြင် ငါတို့သည်မှအခမဲ့ download ပြုလုပ်ရှိသည် ကိုယ်ပိုင် android app စတိုးအဆိုပါ Play Store ကို.
Galaxy S4 Lockscreen ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းသလဲ။
Galaxy S4 Lockscreen ကကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်အပြင်နှင့်သော့ခတ်ခြင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် အန်းဒရွိုက် တစ် ဦး အဘို့ Samsung ရဲ့ Galaxy S4ရှုပ်ထွေးသော tutorial များသို့မဟုတ် terminal ကို root မလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ version version ကိုအသုံးပြုထားသော Android ကိရိယာတစ်ခုသာလိုအပ်လိမ့်မည် အန်းဒရွိုက် 4.0 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသောဗားရှင်း။
ယုတ္တိနည်းအရလျှောက်လွှာသည်တစ်ခုမဟုတ်ပါ Samsung ရဲ့ Galaxy S4 မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုပြီးပြည့်စုံစွာပြန်လည်ဖန်တီးပေးသောအတုတစ်ခုဖြစ်သည် ဂယက်ထသောအကျိုးသက်ရောက်မှု မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် သော့ခတ် / သော့ဖွင့်.
ကတည်းက အက်ပ်ချိန်ညှိချက်များ ဤကဲ့သို့သောဆက်တင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည်။
ပုံသေ Lockscreen ကိုပိတ်ပါ။
Notification bar ကိုပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
သော့ခတ် / သော့ဖွင့်မျက်နှာပြင်၏နောက်ခံပုံများကိုပြောင်းပါ။
ထည့်သွင်းရန်သင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည် Play Store ကို de အန်းဒရွိုက် y အခမဲ့ download လုပ်ပါ.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Android အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်များ - ယနေ့ WhatsApp offline, Play Store ဗားရှင်းအသစ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်နည်း, Android အတွက် SpeedKey ဖြင့် Wifi Password များကိုအလွယ်တကူ Crack နည်း
ဒေါင်းလုပ် - Galaxy S4 Lockscreen
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » မည်သည့် Android4terminal တွင်မဆို Samsung Galaxy S4.0 lock screen မည်သို့တင်ရမည်နည်း
အပလီကေးရှင်းသည် PlayStore တွင်မရှိတော့ပါ၊ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သနည်း
အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့် Android Apps: ယနေ့တွင် SuperBeam
Samsung Galaxy Young ကို root လုပ်နည်း (GT-S6312 / GT-S6310)